नेकपा सांसद आलेले भनेः म को हुँ चिन्छस ?
कैलाली । प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम आलेले सर्वसाधारणलाई निम्नस्तरको भषा प्रयोग गरि अपमान गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । कुनै समय आफै पनि ठेकेदार रहेका आलेले कैलाली जिल्लास्थित विभिन्न सामुदायिक वनमा लागू भएको वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गर्ने क्रममा जनतालाई ‘टाउको झुकाएर बोल म को हुँ चिन्छस् ?’ भन्दै अपमान गरेको भन्दै भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
वैज्ञानिक वनको नाममा व्यापक फडानी भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले संसदीय छानबिन उपसमिति बनाएको छ । उपसमितिका सदस्य रहेका सांसद आलेले अनुगमनका क्रममा सामुदायिक वनका पदाधिकारी र वन कर्मचारीलाई अपशब्द प्रयोग गरेको तथा धम्क्याउँदै हिँडेको बताइएको छ ।
डोटीबाट निर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद आलेले छानबिन समितिका संयोजक प्रदीप यादव सहितको टोली सोमवार कैलाली पुगेको हो । समिति कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–३ फलेबिसौना पुगेको थियो । सांसद आलेले जनकल्याण सामुदायिक वनका अध्यक्ष जनक गिरीलाई झपारेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको हो ।
आफ्नो कार्यशैलीले आलेले आफ्नै सांसद पदको गरिमाको धज्जी उडाएको विभिन्न पक्षबाट टिप्पणी भइरहेको छ । सामुदायिक वनका अध्यक्ष गिरीले आफूलाई सांसद आलेले झपारेको कुरो सुनाउँदै भने, ‘म को हुँ, चिन्छस् । के मुखमा हेरेको टाउको तल गर । तँ साले बढ्ता कुरा गर्छस् । हामी माननीय हुँ मेरो मुखमा हेरेर कुरा गर्ने तँ को होस् ? तेरो वनमा कुन ठेकेदारको लगानी छ भन ?’